Somali - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools » Departments » English Learners » Translation and Interpretation » Somali
Keydka Kheyraadka Dugsiyada Dadweynaha Seattle Somali
Return to In-PersonLearning Top 10 Things SPS Families Need to Know
Waa maxay haddii uu jiro kiis la cadeeyey oo COVID-19 iskuulkeena dhexdiisa?
Sida loo xirto maskaraha
How to Wear a Mask: Somali from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.
Baaritaanka caafimaadka ee maalinlaha ah
Daily Health Screenings - Returning to In-Person School (Somali version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.
Macluumaadka Coronavirus - badbaadi caafimadka qoyskaaga
Somali Coronavirus Update - tips to keep your family safe from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.
Ku noqoshada waxbarashada shaqsi ahaan
Return to In-Person Learning (Somali version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.
Ku fiirso Webside-ka SPS Luqadaada
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo dirto bogga websaydhka ah ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada.
Buttoonka Google Tarjumida waxay bixisaa wax ku ool ah wax ka bedelida shabakadda macluumaadka midkasta, oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda:
Macluumaad dheeri ah ama caawimaad dheeri ah, fadlan kala xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org
Macluumaadka iyo Kheyraadka
Warka Dugsiyada Dadweynaha Seattle
Newsletter: School Beat Wargayska Dugsiyada Dadweynaha Seattle
Communications: Nagu xidhnow Xidhiidhka Dugsiyada Dadwaynaha Seattle
Text Messages: u qortid degmada fariimaha qoraalka
Cuntada loogu talagalay ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa diyaar u ah cuntada oo ay ka soo qaadan karaan dhinaca dugsiga iyo dariiqada basaska marayaan . Si loo haqabtiro baahida bulshada waxaan sii balaarinaynaa goobaha iyo dariiqooyinka qaar isla markaana la badalayo dariiqooyinka baska Waxaad heli kartaa khariidada marinka iyo jadwalka bogayaga student meal webpage. Laga bilaabo Sept. 4, qeybta cuntada waxay furantahay Isniint -Jimcaha, 11:15 a.m.–1:15 p.m.
Qoysaska leh in kabadan hal arday waxay ka qaadan karaan cuntada in ka badan hal booqo dariiqa cuntada soo mareyso, sido kalle , ardayga wuxuu soo qadan karaa wax kabadan hal cunto halkii ay booqan lahaayeen marinka wadada ama goobta maalin walba.
Baro Laptop-kaaga cusub!
Adeegga (How-to Videos) ee Adeegyada Caanka ah
Ma u baahan tahay caawimaad xagga cilmiga ah, Seesaw, ama Kooxo? Fiidiyowyo cusub sida loo-daawado, oo ay ku jiraan noocyo la tarjumay, ayaa hadda laga heli karaa kanaalka SPSTV YouTube. Fiidiyowyadan ayaa ku bari doona sida loo galo, loo maro koorsooyinka dugsiga ee ardaygaaga, loo diro shaqooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan.